SVILUPPARE PUNTI CHIAVE DI FORZAUna volta che hai - Page 140 of 174 - https://themummichogblog.com
Waayo, soo jeedinta cusub, jiibiyay doortay fikradaha waxaad u qortaa si degdeg ah oo ku saabsan Post-u Hagidda. Faa’iidada ee habkan waa in uu kari group iyo diyaarin qoraalada markii uu curinta dhammaadeen. Eeg qoraalada jiibiyay ee bogga soo socda.
Haddaba shaqo uga jiibiyay ee ahaa in la siiyo fikrado kuwan qaar ka mid ah qaab-dhismeedka.
First, wuxuu iyagii ku riday kooxo macquul ah oo uu siiyey calaamad ah in koox kasta.
Markaasuu wuxuu qabanqaabiyaa fikrado ah in koox kasta si ah in u muuqday macquul ah isaga inay: bilaabo xogta, sheegto sida uu helay xogta, ka dibna sharax xogta (fiiri uu si kama dambays ah oo ku saabsan bogga soo socda).
At jiibiyay soo dhaafay lahaa fikradaha uu abaabulay, iyo waxa ay ku qaadatay kaliya oo ku saabsan nus saac ah si uu shuqulka arrintan loo sameeyo. Inkastoo faahfaahinta ahaayeen farsamo, bandhigga noqon lahaa mid fudud: Isaga oo suud tartanka cusub jiray si ka dhaqso badan dacwo kale, wuxuu xaqiijin karin waxa uu ahaa
si dhakhso ah, oo isna wuxuu kuu sheegi kari waayay sababta ay dhakhso ahaa. Tani waxa ay ahayd dhegeystayaasha uu baahan yahay in la baddalo ay qaabka dhan. Wax dheeraad ah oo ku kashkaaashmaan lahaa oo kaliya maskaxdooda, dhoobo saamaynta macluumaadka, iyo dib u dhigto go’aanka.
Isku day naftaada. Doodeen fikrado adiga kuu gaar ah oo iyaga ka dibna group. Xaggee baad arki xiriir dhexdooda fikrado? Fallaadha gan, waayo, wax ka badan saddex kooxood oo ugu waaweyn, ka dibna qabanqaabin fikrado si koox kasta gudahood. Kooxahani waxay noqon doonaan mawduucyada ugu muhiimsan ee aad soo bandhigidda.
Saddex ayaa Suuradwacnaantu ah
Maxaad uga jiibiyay lala iman lahaa saddex kooxood oo fikrado? Waa maxay sababta aan afar ama shan ama lix?
Sababtoo ah waa smart. Wuxuuna ogyahay xoogga “saddex.” Nafsiga ayaa lagu ogaaday in, marka aad isku dayaya inuu qanciyo qof, saddex ay sheegteen waa sasabasho, laba inta badan waa aan ku filan, laakiin afar aad u badan yihiin. Macalimiinta Suzanne B. Shu iyo Kurt A. Carlson tidhaahdaan, “sheegashooyinka More waa fiican ilaa sheegashada afraad, oo ahaa wakhti uu [dhagaystayaasha] arkaan dhamaan sheegashada la shakiga.” Cilmibaadhayaasha ayaa wici saamayn this ka “soo jiidashada saddex,” oo ka shakisan tahay waxa uu leeyahay wax la sameeyo iyada oo sida badan qofka caadiga ah xamili karo in xasuusta muddada gaaban. 
Dabcan, bulsho isku weyn ayaa had iyo jeer loo yaqaan ku saabsan soo jiidashada ee saddex; in sababta ay inta badan la joogo saddex fikrado, seddex dhibcood ugu weyn, ama saddex natiijooyinka si ay u taageeraan sheegashada ah. Lincoln ka hadlay “Xukuumaddu dadka, dadka, iyo weliba dadka aawadiis.” Faransiis The hadlo “xorriyad, sinnaan, iyo bahda.” Kaysar yiri, “waxaan u imid, waxaan arkay, waxaan ka guulaystay.” (Notice waxaan kaliya idin siiyey saddex tusaale.)
“Qofna ma xasuusan karo in ka badan seddex dhibcood.”
Stories, songs, iyo kaftanka waxaa ka buuxa threes ( “Saddex guys socon galay baar …”). Naturalist Diane Ackerman ka tarjumaysaa on qaabkani: “Waxaan si tahay jacayl la nidaamyada in aan obsessively abuuro noo gaar ah, inta badan in threesomes, sida subaxdii, duhurkii, iyo habeenkii, saddexdii gabdhood oo cajiib ah Macbeth ee; Oo saddexdii nin oo xigmad leh, diyaar, dhigay, tag; sonata ah qaab saddex-qayb; Converter ee bixinta saddex rabitaanka; yar, dhexdhexaad ah, oo weynaa, ABC, Goldilocks iyo saddexdii orso; saddexda doofaarro yar; iyo wixii la mid ah. Saddex u muuqataa in ay sida hannaankii doorashada our. “
Xusuusnow, waxaan sheegay in aad soo bandhigayo waa in saddex qaybood; hordhaca ah, jidhka, iyo soo gunaanaday. Haddaba sidaas daraaddeed, aad leedahay saddex dhibcood oo muhiim ah ee jirka ku jira si ay u taageeraan ujeedada. Hadda aad go’aansato waxa si uu wax uga riday.
Sidee waa in aad soo bandhigaan dhibcood aad?
Waxaan ognahay in dadka la xasuusto waxyaalaha hore iyo intii dambeba, waxay maqli. Waxay kaloo soo xusuusan warbixin joogto ah. Mabda ‘waa mid fudud: marka hore dhig dhibic iyo kan ugu dambeeya ee soo noq-caawin doonaa dadka soo xusuuso, oo isagaannu garanaynaa.
Waxaynu wada ognahay in xasuusta waa Asia, in waxaannu xusuusan nahay gelinno oo gogo ‘oo kaliya ee waxa aan maqli, iyo in badan oo ka mid ah waxa aan qabaa waxaannu xusuusan nahay waa khalad. Cilmi nafsiga ku odhan, “From aragtida in xasuusta waxaa jira fursado badan oo aad u heshid macluumaad in la qaldan encoded”  -in si kale loo dhigo, dhagaystayaasha, ma heli doonaan xaq haddii aad dib u gooyaa on fursado ay si aad fahmi.
Taasi hab leh marka hore waxa aad rabto in aad dadka in la xasuusto-iyo waxa la soo dhaafay ku cel-celinta. Tani waxay ku siinayaa xoogga qodobbada muhiimka ah. Sidoo kale waa inaad yarayso oo hadlo si cad marka aad samatabbixin qodobbada muhiimka ah. Sida laga soo xigtay borofisar CUNY iyo khabiir in isgaarsiinta digital Cathy Davidson, “Marka aad soo bandhigo wax soo saarka bilowga ah ee ganacsi iyo marka aad line tasoo samatabbixin dhamaadka, aad yeerista waa badan gaabis ah oo erayadaaduna waa si taxadar leh e-soore ah-ci Xarafka-sameyo. “
Waa in aad sheegtid dhibic kasta oo muhiim ah, waxa ay u taageeraan, oo waxay soo koobaan. Waxaan ugu baaqaynaa in Formula Triple S.
Taas oo ka mid ah laba tusaale waa u fududahay in la fahmo?
“The jiinyeerrada iyo dun waxaa lagu dhejiyay in ay kor u factor permeability ah by saabsan 2 litir halkii mitir afar gees per labaad. Intaa waxaa dheer, isku joog waxaa wax yar ka undersized maxaa yeelay, cabbirka xoog u nugul yihiin size joog oo kala ah oo ku saabsan 7 boqolkiiba jiitaa aerodynamic, sida slide this muujinaysaa. By undersizing aan kobcin karaan permeability by ugu yaraan 2 litir oo yaabaa in ka badan. Laakiin xal dhabta ah waa textured, qaab sharkskin dilmaya-xidhantay. Under microscope elektaroonik ah in tunnel dabaysha dhismeedka this u muuqataa in ay awood ku saabsan 7 litir oo permeability dheeraad ah ka bacdina dhexsocoto 250-mitir. ”
“Joog ayaa waxaa loogu talagalay in ku saabsan 11 litir more permeable badan, dacwana kale oo ku saabsan suuqa. Halkan sida ay jabo:
OROLOGIO Gerald di Rivia Fenech Maltese yandex imm